Teny Soa Sakafo Asabotsy 26 A (Lk. 10, 17-24) 03/10/2020 | FKMP
Teny Soa Sakafo Asabotsy 26 A (Lk. 10, 17-24) 03/10/2020
« Tamin’izany andro izany, dia niverina tamin-kafaliana ny roa amby fitopolo lahy ka nanao hoe: “Tompo ô, na dia ny demony aza dia manaiky anay noho ny Anaranao.” Dia hoy i Jesoa taminy: “Nahita an’i Satana latsaka avy tany an-danitra toy ny varatra Aho. Indro efa nomeko ny fahefana hanitsaka ny bibilava sy ny maingoka mbamin’ny hery rehetra ananan’ny fahavalo ianareo ka tsy hisy hampaninona anareo akory ireny. Tsy noho ny fanahy ratsy manaiky anareo anefa no tokony hifalianareo, fa noho ny anaranareo efa voasoratra any an-danitra no ifalio.”
Tamin’izay nientan-kafaliana tamin’ny Fanahy Masina Izy ka nanao hoe: “Misaotra Anao Aho, ry Raiko Tompon’ny lanitra sy ny tany, noho Ianao nanafina izany tamin’ny mahay sy ny hendry, fa nanambara azy tamin’ny zaza madinika kosa. Eny, Raiko, fa izany no sitraponao. Efa nomen’ny Raiko Ahy ny zavatra rehetra, ary tsy misy mahalala ny Zanaka afa-tsy ny Ray, na ny Ray afa-tsy ny Zanaka sy izay tian’ny Zanaka hanambarana Azy.” Dia nitodika tamin’ny mpianany Izy ka nilaza taminy manokana hoe: “Sambatra ny maso mahita izay hitanareo; fa lazaiko aminareo fa maro ny mpaminany sy ny mpanjaka naniry hahita izay hitanareo, fa tsy nahita, ary handre izay renareo fa tsy nandre.”
« … Tamin’izany andro izany, dia niverina tamin-kafaliana ny roa amby fitopolo lahy… » Tamin’ny fifaliana no niverenenan’ireto mpianatra avy nanantanteraka ny irany.
« … Tamin’izay nientan-kafaliana tamin’ny Fanahy Masina Izy ka nanao hoe: “Misaotra Anao Aho… » Tam-pifaliana no nidera sy nisaotra ny Ray I Jesoa.
Ny olona hirahin’Andriamanitra dia mahazo hery sy fahasoavana ary fifaliana lehibe tsy takatry ny sain’ny olombelona. Tsy tokony entina hireharehana anefa ireny rehetra ireny fa tokony entina hanomezam-boninahitra sy hiderana an’Izy Tompo Mpanjaka.
Ampianaro aho Tompo ô, hisaotra sy hidera Anao mandrakariva amin’ny zavatra rehetra. Ampianaro aho hitahiry mandrakariva ny fifaliana izay atolotrao ahy ary hahay hampiasa izany mba ho voninahitrao irery ihany. Amen
Previous Post: Teny Soa Sakafo – Zoma 26A – (Mt 18, 1-5.10) – 02/10/2020 Fahatsiarovana ny Anjely Mpiambina
Next Post: Alatsinainy 27A – (Lk 10, 25-37) – 05/10/2020